Sizokwakha kanjani ama-backlink ngo-2018?
Imakethe yedijithali iyinkimbinkimbi eguquguqukayo lapho izilungiswa ezintsha zishintsha yonke imithetho yemidlalo. Njengomnikazi we-website, kufanele wazi ukuthi uzodinga ukwakha izixhumanisi ezilandelayo ngemuva konyaka we-2018. Amasu esizoxoxa ngawo kulesi sihloko angakusiza ukuba ufeze izikhundla eziphezulu ngaphandle kokufinyelela kubanikazi bewebhusayithi abazethemba ngokuthola elinye i-backlink lekhwalithi.
Chaza ukulandela emuva
Ubudala lapho izakhi zangasese zakhiwa ngezindlela ezilula zibonakala ziphela. Namuhla, ukuze uthole isixhumanisi odinga ukunikeza okuqukethwe kwekhwalithi, thola umthombo wewebhu lapho ungafaka khona izixhumanisi zakho futhi uhlele ubudlelwane bebhizinisi nomnikazi wewebhusayithi. Amawebhusayithi afanelekile njenge-Huffington Post, i-Forbes, nabanye basebenzisa amasu okuqamba ngokuvumelana nazo zonke izixhumanisi zakho ezingenayo izimpawu ezilandelayo. Kusho ukuthi izixhumanisi zakho ngeke zidlulise noma yiliphi inani njengoba zikhokhwa njenge-nofollow. Kodwa-ke, empeleni, i-backflinks ye-backfink inenzuzo ethile kusuka ekuboneni kwe-CTR. Ngeke kuphakanyiswe ikhasi lekhasi kusukela kungekho juice yokuxhumanisa ezayo kusayithi lakho.
Kunezindlela ezithile ezibalulekile zokwakha ama-backlink ayenzayo futhi anenzuzo ephawulekayo yokusungula injini yakho yokusesha isayithi.
Ukwakha ama-backlink ngokusebenzisa i-Google Amadokhumenti
Kubonakala sengathi i-Google Docs ingaba indlela eyigugu futhi elula ukuthola ama-backlinks. Into kuphela okudingeka uqiniseke ukuthi ukwabelana ngempahla yakho nomphakathi. I-Google inikeza okubalulekile kwimikhiqizo yayo kwimiphumela yosesho. Yingakho ngokudala idokhumenti ye-Google ene-backlink kumakhasi akho wewebhu noma okuqukethwe kuzokusiza uthole ijusi lokuxhumanisa kusuka kuwebhusayithi ephezulu kakhulu, egama le-Google. Udinga ukuba okungenani amagama angu-300 embhalweni wakho. Faka phakathi amagama akho osesho oluphezulu lokuseshela ozama ukulanda okuqukethwe kwakho. Uma idokhumenti yakho idalwe, udinga ukuhambisa i-URL yayo ku-Google naku-Bing.
Ukwakha ama-backlink ngokusebenzisa amasayithi e-Google
Umkhiqizo owodwa we-Google ongakunika inani le-Google Sites. Ikunika ikhono lokudala iwebhusayithi ngaphansi kwegama legama le-Google, njenge-Google Amadokhumenti. Ngokungafani ne-Google Amadokhumenti, i-Google Sites ikunika ithuba lokwenza ngezifiso zakho zangemuva. Njengoba uphenyo lwakamuva lubonisa amasayithi we-Google avumela amawebusayithi afakwe ezinhlakeni ezinokuncintisana kakhulu ukulinganisa kwimiphumela yokusesha ye-TOP-20. Kusho ukuthi ungaba nokufakwa kuhlu okuningi kwimiphumela ye-Google TOP ngokusekelwe esikhathini esithile sokusesha. Usezingeni ekhasini le-Google SERP yesibili lingakhonsa amakhasimende akho angahle futhi ulethe ithrafikhi ebalulekile kusayithi lakho.
Ukwakha ama-backlinks nge-LinkedIn
Yindlela entsha yokuheha ijusi lokuxhumanisa kusayithi lakho, futhi mhlawumbe singokuqala okutshela ngakho ngakho. Le ndlela ikunika ithuba lokuthuthukisa ukuqwashisa igama lakho lomkhiqizo ngokubhekisele imishwana yakho yegama elingukhiye eliphezulu. Uma nje ungena ngemvume nge-LinkedIn, ikunikeza ikhono lokudala i-akhawunti yenkampani. Ngenkathi udala i-akhawunti yakho yebhizinisi, udinga ukuyibeka ngendlela yokuthi ihlose amagama akho angukhiye ephezulu. Njengoba amakhasi e-LinkedIn afaka kahle ku-Google, unethuba elikhulu lokufakwa ezikhundleni zokuqala ze-SERP Source .